Ronaldo oo loo doortay Ciyaartoygii Reer Brazil Ee ugu Wanaagsanaa Abid - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Ronaldo oo loo doortay Ciyaartoygii Reer Brazil Ee ugu Wanaagsanaa Abid
Ronaldo oo loo doortay Ciyaartoygii Reer Brazil Ee ugu Wanaagsanaa Abid
Ronaldo Nazario ayaa ku garaacay halyeyga reer Brazil ee Pele xiddigii ugu wanaagsanaa taariikhda Brazil, waxaana codbixin laga qaaday taageereyaasha kubadda cagta uu ku helay codadkii ugu badnaa.
Ronaldo oo Brazil u qaaday koobkii adduunka 2002, sidoo kalena kursiga kaydka fadhiyey koobkii Adduunka ee 1994kii uu dalkiisu ku guuleystay, waxa kale oo uu semi-finalka tegay koobkii Adduunka ee lagu qabtay Faransiiska sannadkii 1998kii.
Codbixin uu qaaday wargeyska FourFourTwo ayaa waxa xiddigii ugu fiicnaa ee reer Brazil loogu doortay Ronaldo Nazario, waxaana ku xiga Pele, Ronaldinho iyo Rivaldo.
Pele oo lagu tilmaamo boqorka kubadda cagta, lagana sarraysiiyo ciyaartoyda kale isaga iyo Maradona, waxa uu liiskan kaga jiraa kaalinta labaad, waxaana ku xiga Ronaldinho oo sannado uu joogay Barcelona xirfad indho sarcaad ah dunida kaga yaabsaday.
Neymar oo ah ciyaartoyga waqtigan ugu wanaagsan ciyaartoyda u dhashay Brazil ayaa ku fashilmay inuu tobanka boos ee ugu sarreeya soo galo, waxaana uu u dhacay kaalinta 11aad.
Previous articleSAWIRO:-Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo Aas Qaran loogu sameeyay Garoowe
Next articleLocusts arrive in Gujarat from Somalia via Pakistan